Haysashada Website Hacking at Bay With Acunetix: Talooyin Ku Saabsan Cimilada Dhamaan Site Milkiilayaasha
Cybercrime iyo in ay noqdaan kuwo gaar ah, jebinta ayaa kor u kacay. Khasaaraha waa la helayaaxeelad badan iyo si aad u heer sare ah ee jirkooda. Xogta ayaa soo baxday in ay muujinayaan in aysan u shaqeynin shakhsiyaad, laakiin halkii ay ahaan lahayd abulshada kudhaqaaqa jilicsan - ssl perãº. Halkan waxay ku dhajiyaan oo wadaagaan nidaamyada codsiyada internetka cusub ee loogu talagalay inay ku siiyaan habeennada hurdo la'aanta ah.Xubin ka noqoshada boggaga internetka iyo forumyada ayaa ah mid u gooni ah dhowr xulasho.
Maalin kasta waxaad ka akhrido weerarka cusub ee Hacker-ka kaas oo boggaga internetka la qadariyowaxay ku dhacaan nacas. Weerarradani waxay website-ka u soo gudbinayaan boggaan. Qof kasta oo soo booqda bogga internetka ee jabsada ayaa khatar sare ahhelitaanka kombuyuutarkooda.
Maxay dembiga cyberkuna u soo jiitaa? Waa hagaag, jawaabtu waa mid toos ah; aqbalaadda webkatiknoolajiyada ku salaysan ganacsiga e-ganacsiga ayaa abuuray aalado hagaagsan oo loogu talagalay hanti-yaqaannada. Halka codsiyadani ay ogolaanayaanganacsiga si ay ula-xiriiraan macaamiisha iyo alaab-qeybiyeyaasha, tiro ka mid ah hanjabaadyo ammaan oo horey loo aaneyn ayaa la soo saaray.
Sababaha sida sababta website-kaaga loogu bartilmaameedsaday by hackers noqon kartaa badan. IgorGamanenko, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijitaalka ah, waxay bixisaa in la eego dhowr ka dibna waxay muujinaysaa hab lagu ilaaliyo naftaada.
Hacking for saarista xogta xasaasiga ah
Ganacsi kasta ee ku shaqeeya internetka wuxuu ku xiran yahay in uu leeyahay codsiyada websaydhka oo ka duwangawaarida dukaamaysiga, bogagga bogga, foomamka soo gudbinta, waxqabadka firfircoon iyo barnaamijyo kale oo internetka ah. Codsiyada websaydhka waxaa loo qaabeeyeysi ay u caawiso martida inay abuuraan, soo gudbiyaan ayna soo qaataan xog qarsoodi ah, oo lagu kaydiyo xogta..
Maaddaama ganacsigaagu uu shaqeeyo 24/7, qof kasta oo meel kasta oo aduunka ka mid ah ayaa u diyaari karaiyada oo loo marayo. Nasiib darro, codsi kasta oo aan amaan ahayn ayaa bixiya albaab u furan hackers. Haddii ay helaan helitaanka xogtaada,markaas waxaad ku jirtaa dhibaato weyn. Macaamiishaada 'faahfaahinta kaararka shakhsi ahaaneed iyo kaarka deynta' waxaa laga iibin karaa ama la soo bandhigi karaa adduunka intiisa kale. BoqolaalShirkadaha ayaa ka luntay dagaallada sharciga ah ee ku saabsan soo dhaweynta ama xatooyada macluumaadkan xasaasiga ah. Kuwa kale ayaa dukaanka xiray. Dhamaanba way lumeenkalsoonida dadka daneeya iyo macaamiisha.
Hacking si loo hirgeliyo qorshe phishing ah
Ha u maleynin in tan iyo markii xogtaadu ay tahay mid degan oo ammaan ah, waxaad ka badbaado khayaanada.Websaydhkaaga waxaa lagu jari karaa dadka isticmaala indho-la'aanta booqashooyinka 'khatarta' ah ee lagaa diidey bogagga shabakadda. Tani waa sida ay u sameeyaan: iyagageliya codsigaaga codsiyadaada internetka si markaas loo isticmaalo in loo wareejiyo goobta phishing, ka dibna loo isticmaalo in lagu soo qaato bangigafaahfaahinta xisaabta. Bog kasta oo lagu helo inuu yahay phishing (xitaa haddii aad tahay dhibbane) ayaa masuul ka ah dacwad. Mid qaali ah.
Ku takrifalka in lagu xadido bacda fidsan
Bandwidth wuxuu noqon karaa badeeco qaali ah. Waxyaabaha loo yaqaan 'hacker' ayaa jeclaan lahaa in la isticmaaloganacsi sharci darro ah sida wadaagida waxyaalaha la xaday. Markaad hey'adaha federaalka ah soo garaacaan, waa adiga oo leh qaarsharaxaad ka bixinta.
Sida muuqata, website-kaaga waa la jabin karaa sabab kasta. Rumayso, ama mayaQaar ka mid ah jilayaasha qaar waxay ku faafiyaan boggaaga kaliya ee ujeedooyinka SEO ah? Queer, sax?
Acunetix ayaa kaa ilaalin doona
Naftaada ka ilaali jilayaasha adiga oo isticmaalaya Acunetix. Dheecaan diirad saar ah iyo iskutallaabweerarrada xarumaha sida kuwa ku xayiray bogga UN-ka, Waaxda Arrimaha Bini'aadanka ee Qaramada Midoobay, Yahoo iyo Boqortooyada IngiriiskaAdeega bulshada ayaa laga hortagi lahaa iyadoo la isticmaalayo Acunetix. Isku day inaad maanta. Waxaad noqon doontaa badbaado.